सिल्टलले वेब सामग्री स्क्रैप गर्न3सजिलो कदमहरूको सुझाव दिन्छ
यदि तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरु, सामाजिक मिडिया साइटहरु, र व्यक्तिगत बाट डाटा खींच्न चाहानुहुन्छ भने ब्लगहरू, तपाईंलाई सी ++ र पाइजोन जस्ता प्रोग्रामिङ भाषाहरू सिक्न पर्थ्यो. हालै, हामीले इन्टरनेटमा विभिन्न प्रविधि सामग्री चोरीका घटनाहरू देखेका छौं, र यीमध्ये अधिकांशमध्ये सामग्रीहरू उपकरणहरू स्क्रैपिङ र स्वचालित आदेशहरू समावेश छन्।. विन्डोज र लिनक्स प्रयोगकर्ताहरूका लागि, धेरै वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू विकसित भएका छन् जुन हदसम्म उनीहरूको काम कम गर्दछ. तथापि, केही व्यक्तिहरूले म्यानुअल रूपमा सामग्री स्क्रैप गर्न मनपर्छ, तर यो केही समय लाग्ने हो.
यहाँ हामीले 60 सेकेण्डभन्दा कम साइजमा वेब सामग्री स्क्रैप गर्न3सरल चरणहरू छलफल गरेका छौं.
सबै दुर्भावनापूर्ण प्रयोगकर्ताले गर्नु पर्छ:
1 - innokin mvp not charging. अनलाइन उपकरण पहुँच गर्नुहोस्:
तपाईंले कुनै पनि प्रसिद्ध अनलाइन वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रम जस्तै निकासी, आयात जस्ता प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ. io, र पोर्टा स्क्रैपिंग हब द्वारा. आयात गर्नुहोस्. io ले इन्टरनेटमा4मिलि भन्दा बढी वेब पेजहरू स्क्रैप गर्ने दाबी गरेको छ. यसले कुशल र सार्थक डेटा प्रदान गर्न सक्छ र सबै व्यवसायहरूको लागि उपयोगी, स्टार्टअपहरू ठूला उद्यमहरू र प्रसिद्ध ब्रान्डहरूमा. यसबाहेक, यो उपकरण स्वतन्त्र शिक्षकहरू, करारहित संस्थाहरू, पत्रकारहरू र प्रोग्रामरहरूको लागि ठूलो छ. आयात गर्नुहोस्. io SaaS उत्पादन वितरित गर्नको लागि चिनिन्छ जसले हामीलाई वेब सामग्रीलाई पढ्न योग्य र राम्रो-संरचित जानकारीमा रूपान्तरण गर्न सक्षम गर्दछ. यसको मेशिन सिकाइ प्रविधिले आयात गर्दछ. io दुवै coders र गैर-कोडकहरूको पहिले छनौट.
अर्कोतर्फ, निकासीले वेब सामग्री कोडको कुनै आवश्यकता बिना उपयोगी डेटामा परिवर्तन गर्दछ. यसले तपाईंलाई सङ्गठनको हजारौं यूआरएलहरू समयावधि वा समय तालिकामा प्रशोधन गर्न दिन्छ. तपाईं निकासी गरेर डेटा को सैकड़ों देखि हजार पङ्क्ति सम्म पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. यो वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रमले तपाईंको कामलाई सजिलो र छिटो बनाउँछ र क्लाउड प्रणालीमा पूर्ण रूपमा चल्छ.
स्क्रैपिंग हब द्वारा पोर्टा अझै अर्को बकाया वेब स्क्रैपिंग उपकरण हो जुन तपाईंको काम को आसान बनाउँछ र तपाईंको वांछित प्रारूप मा डेटा निकाल्छ. पोर्तियाले हामीलाई विभिन्न वेबसाइटहरूबाट जानकारी सङ्कलन गर्न दिन्छ र कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन. तपाईँले तत्त्वहरू वा पृष्ठहरू निकाल्न चाहानुहुन्छ टेम्प्लेट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, र पोर्टाले यसको स्पाइडर सिर्जना गर्नेछ जुन न केवल तपाईंको डेटा निकाल्नेछ तर तपाईंको वेब सामग्री क्रल पनि गर्नेछ।.
2. प्रतियोगीको यूआरएल प्रविष्ट गर्नुहोस्:
एक पटक तपाईंले इच्छित वेब स्क्रैपिंग सेवा चयन गर्नुभयो भने, अर्को चरण तपाईको प्रतियोगीको यूआरएलमा प्रवेश गर्न र तपाईंको स्क्रैर चलाउनु हो।. यी मध्ये केहि उपकरणहरूले तपाईंको सम्पूर्ण वेबसाइट एक सेकेण्ड भित्र स्क्रैप गर्नेछ, जबकि अरू आंशिक रूपमा तपाईंको लागि सामाग्री निकाल्नेछ.
3. तपाईंको स्क्रैप गरिएको डेटा निर्यात गर्नुहोस्:
एक पटक इच्छित डेटा प्राप्त भएपछि, अन्तिम चरण तपाईंको स्क्रैप गरिएको डेटा निर्यात गर्न हो।. त्यहाँ तपाईले निकालेको डाटा निर्यात गर्न सक्ने केही तरिकाहरू छन्. (3 9) वेब स्क्रेटरहरू तालिकाहरू, सूचीहरू र ढाँचामा जानकारी सिर्जना गर्नुहोस्, प्रयोगकर्ताहरू डाउनलोड गर्न वा वांछित फाइलहरू निर्यात गर्न सजिलो बनाउँदछ।. दुई अधिक सहायक स्वरूपहरू CSV र JSON हुन्. लगभग सबै सामग्री स्क्रैपिंग सेवाहरूले यी ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ. यो हाम्रो स्क्रैर चलाउन र फाइलनाम सेट गरेर वा इच्छित ढाँचा चयन गरी डेटा भण्डारण गर्न सम्भव छ. हामी वस्तु पाइप लाइन को आयात को पनि उपयोग गर्न सक्छन्. io, निकासी र पोर्टिया पाइप लाइनमा आउटपुट सेट गर्न र स्क्रैपिंग गर्दा संरचित CSV र JSON फाईलहरू प्राप्त गर्नुहोस्।.